ဘီးလင်းမြို့နယ် အတွင်း ပိတ်မိယာဉ်များ လာရာလမ်းအတိုင်း လှည့်ပြန် ကုန်တင်ယာဉ် အများစုသာ ရေက?? - Yangon Media Group
ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်း ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်ကားလမ်းမ ပေါ်ပိတ်မိနေသော ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်အများစုမှာ လာရာလမ်းအတိုင်း လှည့်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ဘီးလင်း မြို့နယ်အတွင်းပိတ်မိနေသောနှစ်ဖက်နေရာ၌ ယာဉ်စီးရေနှစ်ရာ ကျော်ရှိရာမှ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် ကုန်တင်ယာဉ်အများစုသာ ရေကျ ချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေမှုရှိတော့ ကြောင်း ဘီးလင်းမြို့နယ် အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဝင်းနိုင်က ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် ဒီမို ရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
”ယာဉ်ကြောနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိတဲ့ကားတွေက ပြန်လှည့်သွား ကြပြီ။ ကုန်တင်ယာဉ်အများစုက တော့ ရေကျချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းမှု တွေရှိနေပါတယ်။ အချို့ယာဉ်ပေါ် ပါသူတွေက စက်လှေတွေနဲ့ဖြတ်ကူး ကြတာတွေရှိကြတယ်။ အန္တရာယ် အရမ်းများလို့ ဖြတ်ကူးခွင့်ကို တားထားပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ကော့သောင်း၊ ထားဝယ်၊ ရေး ဘက်မှ ရန်ကုန်သို့လာသည့် အ ဝေးပြေးခရီးသည်ယာဉ်အများစု မှာ မူလဂိတ်ရင်းသို့ပြန်ရန်မှာ ဝေး လွန်းလှသဖြင့် ဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီး မော်လမြိုင်မှ ရန်ကုန်ဘက်သို့သွားမည့် ခရီးသည် တင်ယာဉ်အချို့မှာ မော်လမြိုင် ဘက်သို့ပြန်လှည့်ရန် ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည်များက တောင်းဆိုသဖြင့် လှည့်ပြန်သွားကြကြောင်း E-lite မော်လမြိုင်-ရန်ကုန်ယာဉ်လိုင်းမှ ဂိတ်မှူး ဦးရဲကိုကိုကပြောသည်။
”ခရီးသည်တွေက ပြန်လှည့်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း လှည့်ပြန်လာကြတယ်။ အခြားကားတွေလည်း လှည့်ပြန်ကြတာများတယ်။ ကုန်တင်ကားတွေ တော့ သိပ်လှည့်ပြန်တာမတွေ့ဘူး။ ကားတွေလှည့်ရတာတော့ မခက်ပါဘူး။ ဟိုဘက်ယာဉ်ကြောမှာကားမရှိတော့ လှည့်ရတာလွယ်ပါတယ်။ အချို့ခရီးသည်တွေက ရေကျော်နေတဲ့ကားလမ်းကို စက် လှေနဲ့ ရေမရှိတဲ့နေရာဆီကို ကူးကြတယ်။ လှေခက တစ်ယောက် ကို ကျပ် ၅ဝဝဝ လို့သိရတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ပိတ်မိနေသောခရီးသည် အချို့မှာ စက်လှေများဖြင့် ဖြတ်သန်းလျက်ရှိရာ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် တစ်ဦးလျှင် စက်လှေခကျပ် ၅ဝဝဝ၊ ကျပ် ၁ဝဝဝဝ မှ ကျပ် ၂ဝဝဝဝ အထိ ရှိနေကြောင်း ယင်းနေရာတွင် ပရဟိတဆောင်ရွက်ပေးနေသူများ ထံမှသိရသည်။ စက်လှေဖြင့် ဖြတ်လာသူများ ကို ရေမရှိသည့်နေရာမှ ကားဖြင့် စောင့်ဆိုင်းကာ မော်လမြိုင်မြို့ ပေါ်ထိ အခမဲ့ လိုက်ပါပို့ဆောင် ပေးနေသည့် ပရဟိတအဖွဲ့များလည်းရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ချောင်းဆုံမြို့နယ် မြင့်မိုရ်တောင်ကျောင်း ဆရာတော်က ”ဘုန်းဘုန်းတို့က ရန်ကုန်ကနေ မော်လမြိုင်ကိုလာ တဲ့ခရီးသည်တွေက မစောင့်နိုင်လို့ မော်လမြိုင်ဘက်ကို စက်လှေနဲ့ကူး လာတဲ့သူတွေကိုစောင့်ပြီး ကားနဲ့ မော်လမြိုင်ထိပို့ပေးနေသလို မော်လမြိုင်ကနေ ရန်ကုန်ဘက်ကိုသွား ဖို့ စက်လှေနဲ့ကူးလာတဲ့သူတွေကို ရန်ကုန်ကိုသွားတဲ့ကားတွေနဲ့ ချိတ် ဆက်ထည့်ပေးတာမျိုးကို ဆောင် ရွက်ပေးနေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကားတွေကလူတွေအတွက် ထမင်းထုပ်တွေ၊ ရေဘူးတွေပို့ပေးနေ ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ပိတ်မိနေသော ကုန်တင် ယာဉ်များထဲမှ ပုပ်သိုးလွယ်သော ပစ္စည်းနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးနိုင် သောပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာ သောယာဉ်များအနေဖြင့် ရေကျ ချိန်ကိုစောင့်မနေဘဲ လှည့်ပြန်သင့် ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
”ခုပိတ်မိနေတဲ့ကားတွေထဲမှာ ဝက်တင်တဲ့ကားတွေလည်းပါတာတွေ့ရတယ်။ ရေကလည်း နောက်နှစ်ရက်လောက်ထိကျမယ် မထင်ဘူး။ ရက်ထပ်ကြာရင် ဝက် တွေသေကုန်မယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်လှည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ခုက ရေတွေမြှုပ်တာတော့ လယ်တွေ ပျက်စီးမှာသေချာတယ်။ အချို့ဆိုရင် ဘာမှမယူလိုက်နိုင်ဘဲ တစ်အိမ်လုံးမြုပ်သွားတာတွေလည်းရှိ တော့ ကူညီပေးကြပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြော သည်။ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရက ဇူလိုင် ၂၇ ရက်မှစတင်ကာဘီး လင်းမြို့ပေါ် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အဝေးပြေးလမ်းမှယာဉ်ဖြတ်သန်းခွင့်ကို ယာယီပိတ်ထားသည်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ ကရင်ပြည်နယ် အတွင်း ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် စာ?
”ပေါ်ပင်တွေလုပ်ပြီးတက်လာတဲ့သူတွေက အနုပညာကြေး ကိုယ်တွေထက်တောင်ရတာတွေကျ နည်းနည်းခံစားရတယ်” ?